Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Zumaan har'a mana murtiitti dhiyaachuuf - BBC News Afaan Oromoo
Himannaan malaamaltummaa Jaakob Zumaa har'a eegala
Pirezidaantiin duraanii Afrikaa Kibbaa jaakob Zumaan bittaa meshaalee loltummaa dolaara biiliyoona 2.5n bara 1990 taasifameen waqabatee malaamatummaan himannaan isaanii mana murtii gaheera.
Isaanis malaamaltummaan, sobaafi haqaan ala maallaqa argachuu walqabatee himannaawwan 16f mana murtii Olaanaa Durbaaniitti argamutti dhiyaatu.
Mr Zumaa kan Guraandhala darbe akka waajjirasaanii gadhiisaniif dhiibbaan irratti taasifamees balleessaa hinqabu jechuun mormaa jiru.
Adeemisi himannaa waa'ee kanfaltiii seeraan kaa'ame motummaan Zumaaf kanfalu qabaa jedhuun walqabatee dheeraa ta'u akka hinollu himamaa jira.
Akkasumas polisoonni deeggartoota pirezidaantii duraanii kumaatama gara mana murtii olaanaatti taasifamuuf karoorame ittisuuf qophaa'aa jiru.
Gabaasaan BBC Andriiw Haardingi akka jedhettis, pirezidaantiin duraan biyyattii kunis dargaggoota Afriikaa Kibbaatiif fakkeenya olaanoodha. baay'eenis akka waan jaarraan calisuu dhumarra gaheetti fudhatu.
Wayita bittaan meeshaale loltotaa waggoota heduun dura taasifamutti Mr Zumaa pirezidaantii ittaanaa turan.
Gorsaan maallaqaa isaanii duraa balleessaa irratti argamuufi bara 2005 keessa pirezidaantii ittaanaa dhaabbata loltu Faransaay kan ture maallaqa gaafachusaatiin hidhameera.
Deegartoommi Zumaa himannaan isaa kan siyaasaan kiyyeefameedha jedhu
Dhimmi kunis waggoota dheeraf siyaasaa biyyaatti rakkisaa turu illeen garuu, himannaan Mr Zumaa irratti saaqamee ture osoo inni filannoo pirezidaantummaa bara 2009 keessaa hin eegaliin dura abbootii seeraa biyyattiin dhiifameera.
Dorgomtoonni isaa akka himannichi irra deebuun yaalu erga eegalanii kaasee ture akka paartii biyya bulchu (ANC) irratti akka hammaatu kan ta'e.
Akkasumas dhiibbaa cimaa ANCn taasifameen aangoo saanii akka gadhiisan taasifama baatii lamaan dura. Wayita sanattis akka ofiin gadhiisu yookiin paarlaamaan sagaleen akka irratti kennamu itti himamee ture.
Deegartoonni Mr Zumaafi maatiiwaan isaa muraasnis himannaan kun kan siyaasaa ofi keessa qabu ta'u amanu. Waan ajandaa riiformii dinagdee cimaa deegareef xiyyeefannaa keessa galfame jechuun mormu.
Viidiyoo, Jaakoob Zuumaa: Pirezidaantii Afriikaa Kibbaa gidirfamaa
Taanzaaniyaan lammilee Itoophiyaa 1,700 hidhaa jiran biyyatti deebisuuf
Biyyoonni hiyyeeyyiin akkamiin talaallii Covid-19 argatu?
Rookkeetii tokkichaan saatalaayitoota hedduu hawaatti erguun milkaa'e
Biyya dhiirri butamee gaa'ila raawwatu
Waldhabdee daangaa Itiyoo-Sudaan duuba seenaan jiru maali?